Wararkii ugu danbeeyey ee dagaalkii saaka ka dhacay magaalada Muqdisho
October 10, 2011 - Written by
Muqdisho:-Wararkii ugu danbeeyey ee ka soo baxa dagaalkii saaka ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaa qaybo ka mid ah degmada Huriwaa iyo Yaaqshiid ayaa qaboobay xili ilaa saaka uu dagaal ka xoogiisa ka socday Carafaat iyadoo dagaalku uu noqday mid xaafadaha lagu dhex dagaalamayo. Sarkaal u hadalay Al-shabaab oo lagu magacaabo Maxamed Abaa ayaa saxaafada u sheegay in weeraro culus oo kaga yimid dhinac ciidanka AMISOM iyo kuwa DFKM ay saaka is difaaceen iyagoo dabin u dhigay ciidanka AMISOM ka dib markii ay fariisamo dhowr ah ay ciidankooda ka saareen si ay isku baahiyaan ciidanka AMISOM iyo kuwa DFKM taasna waxay noo sahashay buu yiri in aan weeraro kale duwan kaga qaadno dhowr jiho khasaaro xooggan aan gaarsiino ciidan ka AMISOM iyo kuwa DFKM.
Sarkaalka u hadlay Al-shabaab ayaa sheegay in ciidanka AMISOM ay madaafiic iyo hub culus ay ridayeen ay ku dhinteen dad rayid ah iyadoo mid ka mid ah Madaafiicda ay ridayeen ciidanka AMISOM uu ku dhacay dugsi quraan iyadoo uu ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dhinac kale Abaanduulaha ciidanka DFKM Gen. C/kariin Yuusuf Dhegabadan oo shirjaraaid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidankiisa oo gacan ka hellay kuwa AMISOM ay saaka la wareegan gacan ku haynta Ex Control Balcad,Isgoyska, Isbitaalkii SOS, Warshadii Baastada, Saldhiga Degmada, Shineemo Cabdi waayeel ilaa qubuuraha barakaat. Abaanduulaha ciidanka DFKM Gen. C/kariin Yuusuf Dhegabadan ayaa sheegay in dagaalka uu sii socon doono ilaa iyo inta ay ciidanka Al-shabaab ay ku kala baxayaan magaalada Muqdisho.
Ciidanka AMISOM oo qayb ka ah dagaalka ayaa saaka waxaa ay madaafiic culus iyo Taangi yo u adeegsaday dagaalka waxaan ay taasi sababtay in ciidanka Al-shabaab ay ka baxaan fariisamo badan oo ay kaga sugnaayeen Degmada Yaaqshiid iyo Huriwaa iyagoo saxaafada u sheegay in xeelad dagaal ay uga baxeen si ciidanka AMISOM iyo kuwa DFKM isku baahiyaan.
Ilaa hadda ma jirto tiro rasmi oo ku saabsan khasaaraha kala gaaray ciidanka Al-shabaab iyo kuwa ciidanka DFKM oo gacan ka hellay ciidanka shisheeyey ee AMISOM iyo dadka rayidka ah oo dagaalku uu ka dhacay xaafadaha ay deganaayeen oo bur bur uu ka soo gaaray Madaafiicda iyo BM-ka ay ridayeen ciidanka AMISOM.